I-PU Impahla yemvula, ibhatyi yokufaka, i-Ski Wear-V-sheng
I-PU Impahla yemvula
Ukubaleka kunye nangaphandle
Izihlangu / iibhutsi
Izihlangu / iBoot
Iimpahla zasebusika zangaphandle
Yimani ikhola yesoftware ...
I-100% yamadoda iphinda isebenze kwakhona ...
Amadoda ebusika Coat Wat ...
Uyilo lweFashoni iPU Ukwaleka R ...
Amadoda iimpahla zemvula zoLwandle oluBomvu M17140
Blue Hooded DB Knit Long Ra ...
Isimbo esitsha Man Imvula ibhatyi A ...
I-Shijiazhuang V-sheng Trading Co, Ltd. wayenjalo esekwe kwiminyaka ye-1996 ukuza kuthi ga ngoku, sime kwidolophu elikomkhulu egama linguShijiazhuang wePhondo le-Hebei, emantla e-China, kufutshane nase-Beijing kunye ne-Tianjin port, kude kube ngoku sine-ISO9001, i-Oeko-Tex 100, izatifikethi ze-BSCI, ezikhethekileyo kwimveliso zonke iintlobo Yokunxiba kwangaphandle okusebenzayo kwabantwana kunye nabantu abadala bebala elipheleleyo elipheleleyo, njenge-DU iimpahla zemvula eziphindwe kabini; Itheyibhile ephothiweyo umphako iimpahla zemvula; Ukunxiba i-ski, ukunxiba okubalekayo kunye nokuqina kunye nezinto zokusebenza, sikwalungile emsebenzini ukunxiba kunye nokunxiba ukhuseleko Eyona ntengiso iphambili iya kuba yiYurophu noMntla Melika.
Uqinisekiso lomgangatho kunye nexesha lokuhanjiswae.
Umgangatho kunye nexesha lokuhambisa zombini zizinto zokuqala ezibalulekileyo. Silandele umgangatho wokuhlola we-AQL2.5-4.0 ngexesha lokuvelisa. Sinikela ingqalelo engakumbi kumgangatho weemveliso, kubandakanya izinto zelaphu, izinto zokusebenza, ubugcisa, ukupakisha ngaphambi kokuthunyelwa, ixesha lokuhambisa, ukhuseleko kunye nezinye iinkonzo ezinje nge-CSR, njalo njalo, iQC yethu yobungcali Iqela labasebenzi liya kubaphumeza kulawulo olusemgangathweni. Umgangatho wethu wamkelwe ngabo bonke abathengi bethu baphesheya kwaye bonwabela igama elihle eYurophu nakuMntla Melika. Ngamafutshane, injongo yethu kukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni kubo bonke abathengi bethu kwinqanaba lexabiso elifanelekileyo.
Wamkelekile kunxibelelwano no-V-Sheng
Sinethemba lokuseka ubudlelwane beshishini obuhle nabo bonke abathengi bethu, sathembisa ukuba siya kuba namandla okubonelela yonke imveliso ngomgangatho olungileyo, ixabiso elifanelekileyo kunye nenkonzo yeklasi yokuqala. Wamkelekile kukhetho V-Sheng kungekudala.
Idilesi:Iflethi A, 12 / F, Isakhiwo saseHaowei, inombolo ye-111 yesitalato iXisanzhuang